यो माध्यम बाट बेच्न सकिन्छ तपाईसँग भएको पुरानो नोट : बेच्नुस र लखपति बन्नुस् – Gorkhali Dainik
April 26, 2021 658
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr ! यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ ।
तपाई संग नेपाली पुरानो नोट छ रु यसरि बिक्रि गर्नुहोस इन्टरनेटमा । आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला eBay को नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला ।
eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ । eBay मा एउटा भारतीय नोटको मूल्य यति कायम गरिएको छ । यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने भद्यबथ को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ १ त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ।
उक्त वेबसाइटमा गएर बगअतष्यल बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको नोटमा कति जना मान्छे ले खरिदको लागि विड गरेका छन् सबै हेर्न मिल्ने छ । यदि तपाई संग धेरै पुराना नोट हरु छन् भने इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ तपाई ।प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन मान्छे हरु । के तपाई संग नेपाली पुराना रूपैया छन् रु छन् भने आजै भदबथ को खाता बनाएर बिक्रि सुरु गरिहाल्नुहोस् १ छैनन् भने यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस भएका हरुले थाहा पाई आफ्नो पैसा बेच्न पाउन ।
Prevबेलामा खानै पाउँदैनन् स्वास्थ्यकर्मी ,पीपीई लगाइरहँदा पसिनाले भित्री लुगा भिजेर निथ्रुक्कै हुन्छ । तिर्खाले ओठ–मुख सुक्छन् ।
Nextकाठमाडौं उपत्यकामा बिहीबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा
दुखद खबर : दोलखामा दुर्घटना : ४ जनाको मृत्यु, वडाअध्यक्षसहित १८ घाइते